Semalt: Pamberi-Peji Nhau Pakuchengetedzwa kweWebhu
Kana pane chimwe chinhu icho vanhu vanogona kudzidza kubva mugore ra2016, ndizvo zvavanogona kuzvidzivirira pachavokubva kunopindwa muchengeti. Mukuda kwekukurudzira, Frank Abagnale, the Semalt Mutevedzeri Mukuru weMutengi weMutengi, akave akafupikisa zvinomwe zvemashoko makuru akaumbwa gore rino.
Kurwisa kumwe kwechido chakanyanya ndeyeDropbox hack, iyo yakakosha zvikuruvashandisi vayo. Izvo zvakaguma mukuparidzirwa kwakakura nevanhau sezvo kune mamiriyoni eakashandura makambisi evashandisi - yokohama tyres advan sport yokohama. Icho chiitiko chakasimbiswaiyo inonyanya kukosha kwevanhu kushandisa mashandisi akakwirira uye akasiyana-siyana, uye mushandirapamwe kuvimbisa kuti makambani anopa zvinodiwa zvakadaro kune vashandi vavo.
Dyn ndiye DNS mutarisiri akawirwa nekunyengedza musi waOctober 21 muna 2016. Wakaitwa uchishandisaa Mirai botnet kazhinji inoshandiswa muzvirongwa zveIoT zvakaita kuti pave nenguva yekudzikisa mawebsite makuru. Icho hachisi chakavanzika chinoita kuti vatengesi vatarise zvigadzirwa zveIoTnekuda kwekuwanda kwavo kutadza. Kunyange zvakadaro, chimwe chinhu icho vadzidzisi vadzidza kubva muchiitiko ichi ndechekuti IoT isina kuchengetedza inogona sei kana yapindamaoko asina kururama.
3. Mutemo weUnited Investigatory Powers Act
UK yakapfuura imwe yemitemo yavo yakakakavadzana, iyo Investigatory Powers Bill, iyoinowedzera huwandu hwekucherechedza muzita rekugadzirisa hugandanga nekuvandudza kuchengeteka. Vane masimba zvino vane ruzivo rwezvigadzirwa zvemashandisikunze kwekuda chikwangwani, sezvo vachiramba vakanyatsogadzikana muhurongwa kwemwedzi gumi nemaviri. Nyaya yakasimudza nhaurirano pamusoro pehurumende inoongororauye zviyero..Vanowedzerawo mibvunzo pamusoro pekuti hukuru hunoenda sei maererano nehutano.
Cryptocurrency yakatanga kugadziriswa nekuchengetedzwa kwemashure mushure mekunge vatengesi vapindaBitfinex exchange. Kunyange zvazvo iyo yekodzero ichibhadhara vashandisi vayo, vanhu vakatanga kuongorora zvakare chirevo chekutsvaga muBitcoins kubva pamarudzi akadaroyekutengeserana kusingatauri kupa zvipo. Nyaya yacho haisi zvachose kunze kwehuni asi hurumende nebhangi dzinotanga kugamuchirapfungwa yekushandisa bitcoins senzira yekutsinhanisa mari muna 2017.
Dzakashata COW Exploit ndiyo ngozi mune Linux's kernel inobvumira vatyawi kuti vawanekodzero dzehutungamiri pamakombiyuta kwemaminitsi mashanu. Linus Torvalds vakashuma kuti vainyatsoziva kuvapo kwavo uyeakaedza kuigadzirisa iyo gumi gumi yapfuura. Iyo inoshanda semuenzaniso wekuti makore akareba sei zvirwere zvinowanzoonekwa sehutsinye hunotyisa mune zvemazuva anonyika ye digital, kurongedza kuenderera mberi kwekuchengeteka kwehutano.
Gore ra20166 rakaona kuwedzera mukurwiswa kwekudzikinura. Vakatarisa zvakasiyana-siyanamasangano, achipa pachena zvakajeka kuti hakuna munhu anenge asingabhadharwi kuregererwa kwekudzikinura. Kurudzira kuziva nezvekudzivirira, nekuchengetekaNdeimwe nzira dzekudzivirira kudzivirira vashandisi kubva pakudzikinura mune ramangwana.
7. Cyber ​​Grand Challenge DARPA
Chinangwa chikuru cheCyber ​​neDARPA chinangwa chekukoka makwikwi kuti apike uye aise purogiramukutadza. Aya matambudziko ane mashoma ekubatana kwevanhu sezvavanonyanya kuzviita
Ramangwana rekuchengetedzwa kwenyika muna 2017
Hazvirevi kuti chii chinoitika muna 2017. Zvisinei, vanokuvadza vanoramba vari kutarisakunyanya kuoma. Vatengesi vanogona kufambira mberi nekurwisa kwavo kutora Tor networks, nezvimwe zvinoshandiswa uye kushandisa shanduro yakanakisisa panguvapairi. Chinhu chakanaka ndechokuti pakati pezvinhu zvishomanana zvichiita musoro muna 2017, kuchengetedzwa kwekuchengeteka.